In ekufundweni kwezinkanyezi, kukhona okuthiwa ishadi natal. Kuyinto a oyisithombe esimile indawo eqondile zezinkanyezi zonke amaplanethi nezinye izindikimba zasezulwini kukhona okwamanje lokuzalwa kwakho kusukela indawo uzalwa ngokuyisisekelo. Kufana ibalazwe, owendlala ubuntu bakho futhi ezibonisa okufunayo / isidingo ezicini ezihlukahlukene zokuphila kwakho. Wonke umuntu uyazi ukuthi Venus iplanethi of love, futhi isibonakaliso kade elise at ekuzalweni kwakho anganika siqonde lokho okudingeka in love wena. Yini Venus yakho ngawe? (Uma udinga ukuthola Venus yakho uphawu, chofoza lapha).
Venus in Aries: Udinga umuntu ukubamba isithakazelo, noma udlulele kwelandelayo fast. Kufanele ukufanisa passion yakho, futhi ube nomdlandla wokuphila. Ungakwazi ukuheha suitors eziningi ezingaba khona, kodwa udlula ngokushesha uma kungenjalo igxile okufunayo. Kufanele uthole esedlule isidingo okukhulu njalo nawo lowo muzwa brand new-.
Venus in Taurus: Udinga umuntu ezinzile futhi unesibopho. Uma bayazivikela sasendle abathathela, usebenzisa elinye indlela. Ungathanda nomuntu yona wena kancane izinto zikanokusho ekuphileni, nomuntu ongaba nature yakho izinkanuko. Wena thatha isikhathi sakho lapho ekhetha umlingani, kufunwe ukuzibophezela inani. Bukela ngokuba ukulawula too noma enomhawu.
Venus in Gemini: Udinga ukumsekela kwengqondo ngaphezu kwakho konke okunye. Uma ungeke ube exoxa kamnandi nothile, uzoba izule. Udinga nomuntu Kuyathakazelisa, uhlobo kwenhlakanipho, kodwa ngubani more lusekelwe kunawe ukuze bakwazi uzole futhi ezibaya wena. Ungase hamba for umuntu omncane kuka wena, noma ngubani enza encane than they are.
Venus in Cancer: Udinga uxhumano ngokomzwelo nothile ngaphezu kwakho konke okunye. Ufuna umlingani abangakwazi ukuvula kuwe ngokomzwelo, ukusekela futhi kukukhuthaze, kodwa ngeke futhi akusunduzela ngaphandle induduzo yakho zone. Ubudlelwane angangenwa buthuntu uma ungathathi amanye amathuba nomlingani wakho ngokuvamile njalo njalo. Qaphelani ukuthambekela ukuba ube umzali ubuhlobo.
Venus in Leo: Udinga ukuba inkanyezi in the ubuhlobo, kanjalo ufuna umlingani ubani oyakuninika ukunakwa ukudumisa udinga. Ungaba ngobugovu kancane ngezinye izikhathi in love, kodwa wena olufudumele futhi unothando kanye, ngokumangalisayo abaqotho. Ongathanda uthando ukuba like okuthile intandokazi romance inoveli yakho noma ifilimu, futhi yothando kakhulu.
Venus in Virgo: Udinga nomuntu okusebenzayo kanye nomthwalo, futhi ngubani ake uthathe isikhathi sakho. Awufuni ukuxhamazela lapho ekhetha umuntu ukuba with, futhi bafuna ukwenza isiqiniseko ukuthi kulungile kuqala. Ungaba a little shy in love, futhi kungase kudingeke ukuba athathe isinyathelo kuqala. Udinga umlingani abangakwazi ukupholisa izinzwa zakho uma sikhathazeke ubuhlobo.
Venus in Libra: Udinga umuntu uthatha ukuzibophezela sina, ngoba isiqiniseko ukwenza. Ngesikhathi esifanayo, kudingeka ube ethile space in a ubuhlobo bukhule, futhi ufuna umuntu okuqondayo ukuthi ubuhlobo njalo ngcono. Uyakwazisa romance and Chivalry, futhi ufuna ukuba aphathwe ngenhlonipho njengomuntu olingana.
Venus in Scorpio: Udinga umuntu eliyithandayo kodwa abangakwazi ukusingatha amandla akho, ngoba kungasenza sikhungatheke ngezinye izikhathi in love. Ungakwazi futha noma abambelele umlingani wakho, enze nokulawula noma lokusizakala nabo, ngakho-ke kubalulekile ukuba usebenzele phezu ukuthi ngaphambi kokuba nomuntu noma uzoba bacindezela nabo away. Ubhekene ukhangwa abantu abanamandla ababonakala strong.
Venus in Sagittarius: Udinga umuntu enesibindi, bold, futhi ukuhleka nawe. You cha fuza uthando kakhulu, ngakho udinga umuntu practical more with love, futhi ngeke akuvumele you fufutheka kakhulu. Udinga uxhumano ngokomzimba nothile, futhi kudingeka sikhumbule i nemizwelo ubalulekile. Lokhu isikhundla ongabonisa okuphakade bachelor / bachelorette.
Venus in Capricorn: Udinga umuntu ovuthiwe, elibhekele, futhi kancane traditional uthando. Ubhekene ukhangwa abantu abaphumelelayo, esesikwenzile noma endleleni eya ekufinyeleleni isimo eliphezulu ekuphileni, futhi ungaya for partners abadala. Njengoba uku bendabuko kanjalo, ungase usebenzise nomuntu uyoletha ezinye spice ngakho ubuhlobo engakutholi stale.
Venus in Aquarius: Udinga umuntu umuntu yabo siqu, unobuntu obuhlukile, futhi umentshisi wena ngokuhlakanipha. You othanda ukuba abangane umuntu wokuqala, futhi banomuzwa wokuthi nobungane kuyisisekelo ephelele love. Inkinga, ungaba isikhathi kunzima uya phambili ubungane, ngakho udinga nomuntu azovula wena up ngokomzwelo futhi ulethe passion.
Venus in Pisces: Udinga nomuntu Uyaziqonda izidingo zakho ezingokomzwelo, Siyokuvikela uma uzizwa abasengozini, futhi ngeke asizakale wena. Uzoba lutho umuntu omthandayo, futhi kungenziwa kalula basetshenziswa ngenxa yalowo. Ukuba a yothando enjalo enhliziyweni, kudingeka umuntu kunengqondo ngaphezu futhi lusekelwe wena. Ubhekene ukhangwa izinhlobo wobuciko.